Folkaane ka Qarxay Buurta Agung Ee Dalka Indoniisiya & Dadka Deegaanka Oo Qax ka Bilaabay.(Sawiro) | Awdalmedia.com
Folkaane ka Qarxay Buurta Agung Ee Dalka Indoniisiya & Dadka Deegaanka Oo Qax ka Bilaabay.(Sawiro)
Shirkadaha duulimaadyada ayaa digniin loo jeediyay kaddib markii uu cirka isku shareeray qiiq madow oo ka dhashay qarax folkaane jasiiradda Bali ee dalka Indoniisiya.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in qarax folkaane uu ka dhacay buurta Agung markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1963, xilligaasi oo 1600 oo qof ay dhinteen.
Waa markii labaad muddo usbuuc ah oo la arko qiiq madow oo ka baxaya qeybta sare ee buurtaasi, waxaana dadka deggan agagaarka buurta lagu amray in ay halkaasi ka qaxaan.
Jasiiradda Bali ayaa ah goobta ugu weyn ee ay tagaan dadka dalxiiska ah ee dalkaasi Induniisiya.
Garoonka ugu weyn jasiiraddaasi ayaa hadda caadi u shaqeynaya balse waxaa jira dhowr duulimaad oo la hakiyay Dayaaradaha ayaa loo soo saaray digniinta cas ee la xiriirta khatarta dambasta foolkaane ka soo baxaysa oo samada isku shareeray meel u dhow Bali, ka dib markii buurta Agung ay soo tuftay qiiq cirka ku shareeran 4000 oo mitir.
Dambaska ka soo baxa foolkaanayaasha ayaa dhaawac u gaysan kara matoorrada dayaaradaha, iyadoo daruuraha dambasta ah ay u socdaan jihada bari ee dhanka Jasiiradda Lombok, garoonka dayuuradaha ee halkaas ku yaallana waa la xiray.